स्थानीय तहको निर्वाचनबारे के भन्छन् कानुनविद्हरू? :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाका स्वतन्त्र सांसद नेता डा. खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तहको चुनाव समयमै हुनुपर्ने गर्ने बताए। उनले अहिले सबै दल र आम नागरिकहरू स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने भनेर लागिरहेकोले त्यसमा कुनै संशय नगर्न पनि आग्रह गरे।
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ ८, २०७८, ०६:३५:००